फेरी लकडाउन कडा बनाउँदै सरकार ! असारमा यसकारण भएको थियो खुकुलो ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/फेरी लकडाउन कडा बनाउँदै सरकार ! असारमा यसकारण भएको थियो खुकुलो !
असार महिना आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएको हुँदा सरकार तथा निजी क्षेत्रले हिसाब मिलन गर्नका लागि लकडाउन खुकुलो बनाइएको हो । पर्याप्त राजश्व संकलन संकलन नहुँदा सरकारलाई खर्च चलाउन समेत मुस्किल पर्दै गएको छ। अर्कोतर्फ वर्षभरि भएका कामको भुक्तानी दिने र त्यसबापतको कमिसन लिने बेला पनि यही समय भएको हुँदा लगाउनलाई खुकुलो बनाइएको हो ।
तर, संक्रमितको संख्या सात हजार नाघेको अवस्थामा पनि लकडाउन खुकुलो भएको मा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । सरकारलाई राजश्व संकलन गर्न दबाब परिरहेकाले लकडाउन खुकुलो बनाइएको हो ।
जनकपुरको सडकमा पैसा छरेर फरार आमुना र अलिना समातिए